Isiqwenga seFayile Explorer !! | I-Androidsis
Ingcebiso entsha yevidiyo apho ndiza kwazisa kwaye ndicebise a, ngokoqobo "Isiqwenga seFayile sokuKhangela kwi-Android", ukongeza ekubeni ngumthombo ovulekileyo kwaye simahla, nayo ayizukusikhathaza ngalo naluphi na uhlobo lwentengiso kuba alunazintengiso zangaphakathi nohlelo.
Isiqwenga se Umphathi wefayile ye-Android nge ujongano lomsebenzisi olunemibala eqaqambileyo kwaye luyilwe kakuhle Ukongeza apho ukwazi ukufumana ifayile ecocekileyo nelula, iyakusothusa ngezixhobo eziluncedo, konke oku kugxile ngendlela yemizobo kubasebenzisi abasisiseko be-Android okanye abasebenzisi abakhangela izinto ezilula, ezicacileyo kwaye ngaphandle kokuphambuka okungeyomfuneko.
Umhloli wefayile endithetha ngaye sisicelo esiya kuthi sikwazi ukukhuphela kwaye sifake ngokuthe ngqo kwiVenkile yeGoogle Play, eyivenkile yesicelo esemthethweni ye-Android, phantsi kwegama Umhloli weFayile yeCX. Apha ngezantsi kwale migca ndishiya ibhokisi yokukhuphela ngokuthe ngqo kuGoogle Play.
1 Khuphela simahla kwiFayile yokuKhangela kwiFayile kwiVenkile yokuDlala kuGoogle
2 Umbala kunye nokusebenziseka ngokulula kweFayile Explorer
2.1 Ithebhu yendawo:
2.2 Ithebhu yethala leencwadi:
2.3 Isithuba sothungelwano:
Khuphela simahla kwiFayile yokuKhangela kwiFayile kwiVenkile yokuDlala kuGoogle
Umbala kunye nokusebenziseka ngokulula kweFayile Explorer
Vula nje Ifayile yeCX yokuKhangela Sifumana ujongano lomsebenzisi olundikhumbuza ngokwam kwifayile ekhangela umhlaba eza kumgangatho oqhelekileyo kwi-Samsung kungekudala.
Ujongano lomsebenzisi apho sifumana khona ulwazi olufanelekileyo malunga nokugcinwa kwangaphakathi nangaphandle kweso sixhobo kunye nolwazi olufanelekileyo malunga nento esijongana nayo kwimifanekiso, iaudiyo kunye nevidiyo esizigcine kwi-Android yethu.
Apha ngezantsi nje komzobo oboniswe kuthi ngendlela ebonakalayo, yangoku kunye nenhle, sinokufumana amacandelo amathathu okanye amacandelo enza eli qhekeza lefayile:
Ukusuka kule thebhu, leyo iboniswa kuthi ngokungagqibekanga xa ufaka isicelo, sinokulawula ukugcinwa kwangaphakathi okanye kwangaphandle kwezixhobo zethu njengezihluzi ezintathu ezinkulu kunye nomgqomo wokuphinda usebenzise, ​​onokuba luncedo kubasebenzisi abaninzi. .
Yiyo loo nto sinokufikelela ngokuthe ngqo kuyo yonke imikhombandlela kwingcambu yememori yethu yangaphakathi, olunye ufikelelo oluthe ngqo kwifolda yokukhuphela ye-Android yethu kunye nokufikelela kokugqibela ngokuthe ngqo kwiiNkqubo zokuzilawula ngendlela elula kakhulu kunye nokubanakho ukucima ii -apps kwibatch .
Ithebhu yethala leencwadi:
Ithebhu yethala leencwadi isinika iindlela ezimfutshane eziluncedo zokufaka iifayile zethu ngendlela enocwangco, ukusebenzisa izihluzi zemifanekiso, iaudiyo, iividiyo, amaxwebhu kunye neefayile ezintsha.
Ukusuka kule thebhu sinokulawula iifayile zethu kwi-smartphone okanye ithebhulethi ngonxibelelwano olukude ngokudibanisa ngeWifi kunye nePC yethu, sisebenzisa i-FTP, i-FTPS, i-SFTP kunye neWebDAV. Ukongeza sinako Vumelanisa iDropbox yethu, iGoogle Drayivu, iOneDrive kunye neBhokisi yeenkonzo zokugcina ilifu mahala.
Ngokumalunga nokuhamba ngendlela eyahlukeneyo kwimemori yangaphakathi okanye yangaphandle ye-Android yethu, I-CX File Explorer isinika ujongano olucocekileyo nolucacileyo apho sinikwa khona ukhetho kunye nokusebenza okungasweleki kwifayile elungileyo yokuhlola.
Yiyo loo nto sinezixhobo zokukopa, ukuhambisa, ukunika igama kwakhona, ukucima, ukukhetha zonke iifayile, ukuhlengahlengisa, ukutshintsha uhlobo lokujonga okanye ukubonisa iifayile ezifihliweyo, oku ukongeza ekubeni, kunokuba kuncinci kangakanani, kunye isiguquli sefayile esinamandla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Isiqwenga seFayile Explorer !!